Thwebula Titanium Backup 7.2.1.2 – Vessoft
Thwebula Titanium Backup
Titanium Backup – isofthiwe enamandla isipele idatha ye izinhlobo ezahlukene. Titanium Backup kwenza ukususa noma ukubuyisela amafayela avikelwe futhi uhlelo izicelo. Isofthiwe kudala ngokulondoloza eziningana futhi encrypts kubo ukuvimbela eminye ukulahleka kwedatha. Titanium Backup kwenza ukumisa Ukusekela ngokulondoloza ngokuhambisana nesimiso set noma enze lendlela mode manual. Isofthiwe ikuvumela ukubuka okuqukethwe amafolda kanye uthole ulwazi mayelana nanoma yimaphi amafayela. Titanium Backup has a umsebenzi for lula ukudlulisa idatha kwimemori zangaphakathi kudivayisi kulowo yangaphandle.
Okususiwe noma sivuselela idatha
Ukudluliselwa idatha ku imemori khadi
Akhiwa-in browser ifayela
Backup in mode othomathikhi
Amazwana on Titanium Backup:
Titanium Backup Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... Google Drive 2.3.283.31.33
English, Afrikaans, Українська, Français... Total Commander 2.62
English, Deutsch, 中文, Русский... Google Calendar 5.5.7.124953442